Selukubameli olokuthukwa kukaZimdollar - Ilanga News
Home Izindaba Selukubameli olokuthukwa kukaZimdollar
NGUZIMIPHI “Zimdollar” Biyela okuthiwa uthukwe ezinkundleni zokuxhumana esolwa ngokungaziphathi kahle nguWelile Mchunu.
UMSAKAZI woKhozi FM, uZimiphi “Zimdollar” Biyela, uselufake kubameli udaba lwakhe lokuthukwa ngothile owayezibiza ngoWelile Mchunu.
Kuzokhumbuleka ukuthi emasontweni ambalwa edlule, ILANGA LangeSonto elizalwa yiLANGA , labika ngokuthukwa kwalo msakazi ngudadewabo kaNgizwe Mchunu, uWelile, ongumlandeli kamasikandi odumile.
Kwabikwa ukuthi uWelile wafaka i-video ezinkundleni zokuxhumana eshiya angalazi ngoZimdollar, emsola ngokungaziphathi kahle.
Into eyasusa umsindo kwaba wukuphawula kwalo msakazi kuSgiya Ngengoma (okuwuhlelo alushayelayo), ethi amabhinca akhalela izihlanu zawo avote ngazo ngesikhathi kuvotelwa
ingoma eyayizohlukanisa unyaka.
Indaba yokuvota ibiwusawoti esilondeni emabhinceni njengoba ayenenkolelo yokuthi umculi kamasikandi, uNtencane owayebalwa nabawu-10 ababevotelwa wayesethubeni lokuba ingoma yakhe ethi “Wawuthembeni” kube yiyona ehlukanisa unyaka.
Konke lokho kwashabalala njengamazolo ebona ilanga ngemuva kokuba uMnu Owen Ndlovu wanikela eNkantolo eNkulu yaseGoli, walumisa lonke lolo hlelo, ekhala ngokuthi iSABC imdlela amandla akhe ngoba indaba yokuvotelwa kwengoma yonyaka, kwabe kuwumbono wakhe.
UKhozi FM lwagcina lungakwazanga ukuqhubeka nokumemezela ingoma yokuvalelisa enyakeni ka-2019 kungenwa kophezulu.
Kuze kube yinamhlanje kusalindiwe. ILANGA liyibonile incwadi ethunyelelwe uWelile. Kule ncwadi abameli bakaZimdollar, iZungu Incorporated, banxusa uWelile ukuba axolise aphinde asuse zonke izinto azibhale ngekilayenti labo ezilehlisa isithunzi. Iqhubeka ithi uma ehluleka wukwenza lokho, uzobhekana nengalo yomthetho.
Welulekwa nangokuthi uma indaba igcina iphelela emthethweni, nguyena oyobhekana nezindleko zabameli bezinhlangothi zombili. Ethintwa ngale ncwadi uWelile, uthe “Ngizwile ngendaba izalukazi zixoxa emholweni zithi kunencwadi efikile, mina kangihlali la kuhanjiswe khona incwadi. Ngeke futhi ngikhulume indaba yencwadi engakafiki ezandleni zami,” kusho uWelile.
ILANGA limtshela ukuthi phakathi kwezinto ezisencwadini kukhona lapho kuthiwa makayocisha akubhale ezinkundleni zokuxhumana uthe: “Izinkundla zokuxhumana akuzona ezami, mabatshele abanikazi bazo bacishe lokho,” kusho yena.
Le ncwadi ibhalwe yaqondiswa eMahhashini, eMtubatuba, eduze kwesikole uMtubatuba Primary School.
Imizamo yokuthola uZimdollar iphunzile, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.
Olunye belungangeni nhlobo. Kuphinde kwazanywa inombolo yebenkampani yabameli ebhalwe kule ncwadi ethunyelelwe uWelile, kodwa nayo yangangena.
Previous articleUcweba izinyembezi “ngokunukubezwa” ngumasitende
Next articleUmdlali waseMphithi ulibangisa eSpain